Somali (Soomaali) | Ohio State Medical Center
KALA XIRIIR TURJUBAAN NUMBARKAN 1-866-336-7121
Haddii aad dooneyso xog ku saabsan talaalka COVID-19, ama inaad qabsato balanta talaalkaaga, fadlan wac 1-866-336-7121 si aad ula xariirto turjumaan, kadibna ka codsato turjumaanka inuu kugu xiro khadka talaalka ee ah, 614-688-8299 (VAXX).
Macluumaadka boggaan ku qoran waxaa loogu talagalay in loo adeegsado tilmaamo guud oo kaliya. Turjumaada macluumaadkii ugu danbeeyay ayaa laga yabaa inaan isla markiiba la helin. Mar walba la hadal xirfadle caafimaad marka koowaad kahor inta aadan qaadan go'aano kasta oo ku saabsan daryeelka caafimaadkaaga.
Warbixin kooban kana hadlaysa COVID-19
Maxaad sameyneysaa haddii aad isku aragto calaamadahiisa? Maxaad sameyneysaa haddii aad hesho jawaab in cudurka aad qabto ah? Sidee looga hortagaa faafida cudurkan?
Baro inbadan Learn more
Hadii aad qabto su'aalo, walaac, ama calaamado la xiriira cudurka COVID-19, fadlan wac dhakhtarkaaga gaarka kuu ah, fadlan la xiriir cisbitaalka OSUWMC COVID-19 xaruntiisa taleefanka 614-293-4000. Dir 1-866-336-7121 si ugu horeyn luguugu xiriiriyo turjubaan.
Baridda Bukaanka Waxyaabaha ka hadlaya COVID-19
Tallaalada COVID-19 Waxyaabaha ay Tahay Inaad Ogaato COVID-19 vaccines What you should know
Su'aalaha Badanaa La iswaydiiyo ee ku saabsan Talaalka COVID-19 Frequently Asked Questions about the COVID-19 Vaccine
XAQIIQOOYINKA FUDUD EE KU SAABSAN TALLAALKA COVID-19 COVID-19 Vaccine Quick Facts
Sharciga Booqashada Visitor Policy
Xiro Maaskaraha Neefmareenka Wejiga Wear a Face Mask
Tijaabada Difaaca Jidhka Antibody Testing
Karoono fayris (COVID-19) Warbixinta Daryeelka Tijaabada kadib Coronavirus (COVID-19) Care Instructions After Testing
COVID-19 Tijaabada karoono fayris ee dhamaan bukaanada COVID-19 Testing of all Patients
Tusmada Qaliinka ka hor Before Surgery Handout
COVID-19 warbixinta bixida ee Karoono fayris COVID-19 Discharge Instructions
Fadlan noosoo sheeg kahor booqashadaada haddii aadan haysan caymis caafimaad ama aadan dhiibi karin qarashka adeegyada ama daawooyinka. La taliyaasheena dhaqaalaha ee tababaran ayaa ka shaqayn doona inay kaa caawiyaan helitaanka taageero dhaqaale. Kaliya wac 614-293-0860 laga bilaabo 9 subaxnimo iyo 4 galabnimo maalmaha shaqada.
Haddii aadan haysan caymis ama aadan haysan caymis kugu filan, halkaan ayaad ka helaysaa ilaha caawimaada qaarkood:
Medicaid wuxuu caymis caafimaad siiyaa malaayiin Ameerikaan ah. Fadlan booqo bogga Medicaid si aad u aragto inaad u qalanto, ama aad u codsato, booqo.
Haddii aad lumiso caymiskii aad shaqadaada ku heli jirtay, COBRA ayaa ku siinaysa caymis aad adeegaaga kusii wadato.
Barta Affordable Care Act Marketplace, waxaad daalacan kartaa, isku fiirin kartaa aadna ka iibsan kartaa caymis caafimaad.
Si laguugu qiimeeyo barnaamijyada caawimaada dhaqaalaha oo dheeraad ah oo lagu baxsho Ohio State Wexner Medical Center (Xarunta Caafimaadka ee Wexner ee Gobolka Ohio), wac Billing Customer Services (Adeegga Biilasha Macamiisha) ood ka wacayso 614-293-2100.
Kala xariir la taliyaasheena dhaqaalaha nambarka 614-293-0860.
Liiska qiimaha iyo qiyaasaadka qarashka adeegyada ayaa laga helayaa boggeena.
MyChart ayaa kuu sahlaysa inaad si amaan ah u adeegsato kumbuyuutarkaaga ama moobilka si aad u maarayso una hesho xog ku saabsan caafimaadkaaga, u gasho qaybo kamid ah diiwaannadaada caafimaadka, u akhrido biilaashada aadna u samaysato qorshayaal lacag bixin. Si aad isku diiwaan-gelisid, booqo mychart.osu.edu.
Xeerka Caawimaada Dhaqaale Financial Assistance Policy
Soo Dejinta Soomaali COVID-19: Xadid Khatarta Caabuqa Korona Fayruska
Somali COVID-19 Downloads: Reduce your risk of Coronavirus infections
Dhaq gacmahaaga Wash your hands
Dabool hindhisyadaada Cover your sneezes
Ka fogoow qofka walba oo buka Avoid contact with anyone who is sick
Si fiican u kari hilibka iyo ukunta Thoroughly cook meat and eggs
ka fogoow in aad si toos ah ula macaamisho dadka xanuunka qaba iyo xeryaha xoolaha la dhaqdo lagu xanaaneeyo Avoid unprotected contact with sick people and with live farm animals
Nadiifi gacmaha kadib marka aad qufacdo ama hindhisto ama aad caawiso qof xanuusan Clean hands after coughing, sneezing or caring for someone
Ku nadiifi gacmaha saabuun iyo biyo ama jermis dilaha ku saleysan aalkolada Clean hands with soap or alcohol-based sanitizer
Markaad isticmaasho tiishka/madiilka ku rid weelka qashinka lagu rido oo xiran Throw tissues into closed trash can
Iska Taxadir marka aad safarka u baxaysid
Ku dadaal caafimaadkaaga marka aad safar aadeyso (Somali) Stay healthy while traveling (Somali)
Stay healthy while traveling (English) Stay healthy while traveling (English)